Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa Moqaadishootti balali'uu addaan kute - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Keekii alaabaa Itoophiyaa fi Somaaliyaan faayame
Daandiin xayyaaraa Itiyoophiyaa balaliinsa Moqaadishootti taasisu addan kutuun gabaafame.
Balali'insi Xiyaara Itoophiyaa Moqaadishootti taasifamu akka addaan cituuf kan sababa ta'e namini lammii biyya biraa ta'e tokko Daandii Xiyyaara Itoophiyaatti seenuuf yeroo jedhutti borsaa isaa keessatti waanti dho'uu danda'u keessatti argamuun boodadha.
Kun kan ta'e gaafa Amajji 19 buufata xiyyaara Moqaadishootti ture.
Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa waggaa 41 booda Moqaadiishootti
Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa jalqabaatiin Asmaraatti balali'u barbaaddu?
Akka jedhametti namichi shakkame kun lammii Afrikaa Kibbaati. Borsaa nama kanaa keessatti gaazii dhoo'uu danda'utu keessatti argame. Qondaaltonni nageenyaa buufata xxiyyaaraa jiran erga to'annoo jala oolchanii booda, humnoota nageenyaa buufata xiyyaaraa sana keessa hojjetanitti kennameera.
Gabaasaaleen tokko tokko akka agarsiisanitti, namichi shakkamee to'annaa jala oolfame kun ejensii biyya alaa mooraa buufata xiyyaaraa cinaatti argamu keessa hojjeta.
Daandiin xiyyaara Itoophiyaas sababii kanaan walqabatee yeroodhaaf gara Moqaadishootti balali'uu kan addaan kute.
Maddawwan bulchiinsa buufata xiyyaaratti dhiyeenya qaban akka jedhanitti, bulchiisni Daandii Xiyyaara Itoophiyaa waa'ee namichi waan dhodho'u qabatee ture sanaa odeeffannoon dabalataa akka kennamuuf gaafatee ture.
Namichi shakkamaan kun harka qaama nageenyaa biyya alaa kan jiru ta'ullee, kaayyoon namicha kanaa maal akka ta'e odeeffannoo argachuuf ture Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa kan gaafatee ture.
Daandiin Xiyyara Itoophiyaa gara Moqaadishootti balali'uu kan eegale Sadaasa 2018 yommuu ta'u torbanitti guyyaa afur (Sanbata, Wixata, Roobiifi Jimaata) akka balali'u miidiyaan biyya keessaa gabaasaniiru.